यही हो मेरो कोसेली
संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि अर्थमन्त्री रामशरण महत बजेट ब्रिफकेस देखाउँदै । तस्वीरः अनलाइनखबर
ल सुरू भो है
एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना सुरु गर्दै । राखेप कभर्ड हलमा मतगणना भइरहेकोछ । तस्वीरः श्रीधर पौडेल अनलाइनखबर
भानु जयन्तीको अवसरमा काठमाडौको रत्नपार्कस्थित दरबार हार्इ स्कुलको परिसरमा रहेको आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिकमा माल्यार्पण गर्दै राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे । तस्वीर : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
भानु जयन्तीको अवसरमा काठमाडौको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बामदेव गौतम र राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे कुराकानी गर्दै। तस्वीर : अनलाइनखबर
नयाँ कार्यक्रमविनै ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट
विपक्षी दल र व्यवसायीहरु असन्तुष्ट २९ असार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटप्रति...
तलब १० प्रतिशत बढ्यो, कर्मचारीको चित्त बुझेन
पोशाक र भ्रमण भत्तामा वृद्धि, महंगी भत्ता यथावत २९ असार, काठमाडौं । सरकारले बजेट भाषणमार्फत कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धिको घोषणा गरेको छ । तर, सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेकै कर्मचारी संगठनहरुले असन्तुष्टि...
काठमाडौंको प्रहरी प्रमुखबाट रमेश खरेल हटाइए
डिआइजी र एसएसपीहरुको सरुवा र हेरफेर २९ असार, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा डिआइजी विज्ञानराज शमालाई सरुवा गरेको छ । त्यहाँ कार्यरत डिआइजी विश्वराजसिंह शाहीलाई यसअघि...
हट्ला त तीन वर्षमा लोडसेडिङ ?
नेपाल टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा बुद्धिप्रसाद आचार्य नियुक्त
वीर अस्पतालमा भीआपीको उपचारका लागि छुट्टै वार्ड
मुलपानीमा क्रिकेट मैदान बनाउन २० करोड बजेट
पूरा होला त ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य ?
प्रेमीको खोजीमा रहेकाहरुका लागि ५ टिप्स
वायुसेवा निगममा ५ वर्षमा २२ जहाज पुर्‍याइने
तामाङ दाइ भन्छन्- गरीबलाई बजेट चाहिँदैन, नेपाल बन्द नहोस् !
बाबुआमा इन्टरनेट अम्मली बन्दा दुइ महिने छोरीले ज्यान गुमाइन्
एमाले चुनाव : पहिलो दिन केपी ओलीको प्यानल नै अगाडि
पाँच करोड माग्ने सभासदलाई १ करोड दिने घोषणा
सिन्धुपाल्चोकमा घर भत्किँदा ६ को मृत्यु
एघार महिनामा साढे ५ खर्ब नाघ्यो व्यापार घाटा, पेट्रोलियम आयात १२३ अर्ब
अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा कति पैसा पाउँछन् ?
२९ असार, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा बुद्धिप्रसाद आचार्य नियुक्त भएका छन् । यसअघिका प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईलाई दिइएको ६ महिने म्याद सकिएपछि संचार मन्त्रालयले...
२९ असार, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुखसहित विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि वीर अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न वार्ड बनाउने घोषणा गरेको छ । आइतबार संसदमा आगामी आर्थिक...
२९ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममा आगामी ५ वर्षभित्र २२ वटा जहाज पुर्‍याइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक...
२९ असार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवा ६ खर्ब रुपैयाँको बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछ । तर, बागबजारमा कितावको भारी बोकिरहेको अवस्थामा...
वायु सेवा निगमको विमान मर्मत गरियो, सोमबारबाट उडान
बजेट पारित गर्न सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद बैठक
रंगशालामै खेलकुद मन्त्रीलाई प्रवेश निषेध
जाजरकोटका चौध विद्यालयको खाता रोक्का
नेदरल्याण्ड तेस्रो, ब्राजिलको लगातार दोस्रो हार
वैद्य र विप्लवको दस्तावेज थन्कियो
२९ असार काठमाडौं । सरकारले ‘उज्यालो नेपाल, सम्मृद्ध नेपाल’ अभियान अन्तरगत आगामी तीन वर्षमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । नयाँ बजेट सार्वजनिक...
२९ असार काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७१/०७२) मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ८ प्रतिशतको मुल्य वृद्धि (मुद्रा स्फिति)को प्रक्षेपण गरेको छ...
२९ असार, काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तरगत १ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । सभासदहरुले निर्वाचन क्षेत्रलाई ५/५...
ब्रिफकेस फोर्ने पूर्वसभासद भन्छन्- त्यो ठीक गरियो !
२९ असार, काठमाडौं । पहिलो संविधानसभामा एमाले नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट भाषण गर्न संसदमा प्रवेश गर्नासाथ उनको ब्रिफकेस खोसेर फुटाइयो । त्यसरी...
एमाले मतगणनास्थलमा कसिकसाउ
मुलुकमा स्थिरता कायम गर्न समयमै संविधान : मन्त्री सिंह
के रोग लाग्यो नेपालका कम्युनिस्टलाई ?
भानुभक्त आचार्य : भारतमा हाइहाइ, नेपालमा केही न केही
सडक पुगेपछि गाउँमा भोजभतेर
नेकपा-माओवादीको बिस्तारित बैठक आज पनि
विश्वको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा मानिएको इन्टरनेटको लत केही दक्षिण कोरियालीहरुको लागि घातक तथा निकै चिन्ताजनक विषय बनेको छ । सन् १९९० को सुरुमा कोरिया सरकारले देशमा इन्टरनेटको तिब्र विस्तारका लागि नीति लागु गर्यो र ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधार निर्माणमा भारी लगानी समेत गर्यो । तर सरकारको यस्तो लगानी अहिले धेरै
एप्पलको नयाँ सस्करणको आइफोन ६ यहीँ वर्ष बजारमा आउने भएसँगै यसका फिचर्सका विषयमा विभिन्न खाले अनुमान भैरहेका छन् ।...
के तपार्इलार्इ बिर्सने रोग लागेको छ ?
देमेन्सिआ भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाबाट आएको हो । ल्याटिन भाषामा यसलाई डे मिन्टस भनिन्छ । डेको अर्थ अलग र...
साउदीको नेपाली दूतावास र नेपालीको दु:ख
साउदी अरेबियाबाट चार महिनामा नेपाली कामदारको शव नेपाल पुग्दा खुशीले राजदूतज्यूलाई खुल्ला दिलले धन्यवाद दिएको पनि देखें । उता...
भारतमा बन्दैछ विश्वकै अग्लो रेलवे पुल (फोटो फिचरसहित)
मेस्सीलाई म्याराडोनाको विशेष सन्देशः जर्मनीविरुद्ध दुई गोल गर
अर्जेन्टिनाका महान फुटबलर डिएगो म्याराडोनाले विश्वकपको उपाधि भिडन्तअघि लिओनल मेस्सीलाई विशेष सन्देश पठाएका छन् ।
विश्वकप सम्वन्धी आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत मेस्सीलाई पठाएको सन्देशमा म्याराडोनाले फाइनलमा दुई गोल गर्न आग्रह गरेका छन् । 'आइतबार तिम्रो खेल हुँदैछ । तिमी आफ्नो टिमलाई...
गोलपछि मेस्सी किन हात हावामा फैलाउँछन् ? (रोचक १५ प्रशंगसहित)
विश्वकप फुटबलको उपाधि जिते पनि नजिते पनि लिओनल मेस्सी सफल फुटबल स्टार हुन् । क्लबका लागि सबै उपाधि जितिसकेका उनी देशका फुटबलको राजा को बन्ला : अर्जेन्टिना कि जर्मनी ?
जर्मनी दक्षिण अमेरिकामा विश्वकप जित्ने पहिलो युरोपेली देश बन्नुका साथै छातिमा चौथो तारा थप्न आतुर छ । तर, उत्कृष्ट फुटबलर लिओनल डेभिड बेकहृयाम भन्छन्- विश्वकपको उपाधि अर्जेन्टिनाले जित्छ
जेम्स रोड्रिग्वेजले भने-आँखा चिम्लिएर रियल मड्रिड जान्छु
ब्राजिलका कप्तानले भने- जर्मनसँग जस्तो हार अब १०० वर्षमा पनि हुन्न
बिजनेस नयाँ कार्यक्रमविनै ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट
२९ असार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटप्रति आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रबाट कडा आलोचना आएको छ ।
नयाँ बजेटमा चालु खर्चतर्फ ३ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगत खर्चतर्फ १ खर्ब ६६ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ...
२९ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ५ खर्ब ६७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन घाटा अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा
१३ अंकले बढ्यो नेप्से
२९ असार काठमाडौं । साताको पहिलो दिन १३ अंकले बढ्दै नेप्से परिसूचक १०३६ अंकमा पुगेको छ । अपरान्ह ४ बजे बजेट आउने भएपछि नेप्से बढेको हो । बजेटले पुँजी
कामना विकास बैंक र ओम फाइनान्स मर्जर हुने
बजेटको जानकारी गराउन राष्ट्रपति कार्यालयमा अर्थमन्त्री
बीस वर्षमा ३० सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण
२९ असार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवा ६ खर्ब रुपैयाँको बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछ । तर, बागबजारमा कितावको भारी बोकिरहेको अवस्थामा भेटिएका रामेछापका धनवीर तामाङले यो...
प्रकृतीलाई ‘आई लभ यू’ भन्न नसक्दा(भिडियो)
उसो त ‘होस्टेल’ डेब्यू हिरोइन प्रकृती श्रेष्ठ विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन् । तर उनलाई मोडल पल शाहले ‘आई लभ यू’ भन्न सकेनन् । नितिन...
‘कमेडी नाइट्स’मा फर्किइन् ‘गुत्थी’
भारतको सबैभन्दा चर्चि शो ‘कमेडी नाइट्स विथ कपिल’मा कलाकार सुनिल ग्रोवर फर्किएका छन् । ‘गुत्थी’ पात्रको भूमिका गरेर एकाएक चर्चामा आएका सुनिल, कपिल र...
प्रेम गर्ने समय छैन ईन्दिरासँग, भन्छिन्-’ म सम्पूर्ण प्याकेज’
अष्ट्रेलियामा देखाइयो नीशा र स्वतन्त्रको प्रेम
होलीमा सुदर्शन र पुजाको प्रेम
रानी भन्छिन्– म छिटै आमा बन्न चाहान्छु
कपिलद्वारा सन्नी लियोनीको फिल्म अस्वीकार, सलमानका भाइले कपिललाई ब्रेक दिने
तीन बर्षको टेटिङपश्चात यसै बर्ष निर्माता आदित्य चोपडासँग बिबाह बन्धनमा बाँधिएका नायिका रानी मुखर्जीले आफु छिटै आमा बन्न चाहेको बताएकी छिन् । ‘ हो...
गरिमालाई थपिएको चुनौती, फिल्म चल्ने कि नायिका ?
सफलताले मानिसलाई चुनौती थपिदिन्छ । नायिका गरिमा पन्त अहिले यस्तै शिखरमा छिन् । ‘सार्क फिल्म फेस्टिभल’मा उत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड जितेपछि हराएकी गरिमा एकाएक जुरमुराइन् । गरिमा जुरमुराउँदै गर्दा कतिपय चल्तीका नायिकालाई थ्रेट पनि बनिरहेको...